June 11, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 6
Waxii aad qarsataa way ku qudhunsadaan ee waxaa hadda daruuri ah in khilaafka beelweynta Majeerteen ee sii xoogeysanaya ee uu isbahaysigaasu ka dhex aloosay sida oogu dhakhsaha badan lagu soo afjaro. Waxaa qaladaadkaas straatijiga ah ee dhaawaca sababay ka koow ah in xulufada ay Cadde Muuse oo magaca Cismaan Maxamuud afduubtay iyo Cabdi Weli Gaas oo magaca Cumar Maxamuud afduubtay xasaanadda Boqorka Daarood ninkii xaqa u lahaa inta ay ka dhaxal wareejiyeen walaalkii oogu caleema saareen. Ku dar faragalinnada ay Gaas iyo Deni ku sameeyeen maamullada hoose ee deegaanada Bari, Nugaal iyo Mudug ba.
Puntland geyi ahaanteeda iska daa ee waxay halis xuni haata soo waajahday tolnimada tolweynaha Puntland wada dhistay ee ku na dhaqan qudheeda oo haddii aan degdeg wax looga qabanin aanay labadu ba sii jiri doonin xaqiiqdii. Is ximintan ay xulufadan aan soo magacaabay Maxamuud Saleebaanka iyo beelweynta Majeerteen ka dhex huriyeen waa qori dab leh ee ay Labadaryaalka Puntland ku dhex tuureen. Inta aanu dabku qabsanin waa in dhakhso loo dammiyaa oo tolka miyirka qabaa ay xaajada soo dhex galaan.
Puntland way sii suuxaysaa oo waabeydii ay Cadde Muuse iyo Cabdi Weli Gaas walaaqeen bay Majeerteenka waraabiyeen oo u sabab ah.
Nidaam La’aanta Soomaaliya iyo Baahida Dowladnimo.?…
Clear/Memories”@Soomaaliya waxaa ay ahayd goob dagaal muddo kabadan 27 sano,waxaana ugu wacnaa garasho la’aanta Shacabka soomaaliyeed. Markaad dib u milicsato taariikhda Soomaalida qarniyo kahor, waxbo kama duwana qaabka ay maanta u wada noolyihiin Tusaale Soomaalidu waxaa ay ahaayeen dad ayaga islaaya ama qowmiyado kale laaya ayagana waxay ahaayeen dad u heelan dagaal iyo qalaalso. Tan micnaheedu ma ahan Soomaalida oo idil ayaa sidan ahayd laakiin intooda badan waxaa ay ahaayeen dad dagaal badan oo qalalaaso iyo dagaal u heelan. Waxaadna kawada dheehan karaysaa suugaanta iyo taariikhda maguurtada ah ee soomaalida.
Su’aasha iswaydiinta mudan ayaa ah maxay tahay sababta soomaalidu u tahay umad u heelan qalalaaso iyo daganaan la’aan?
@Suldaanka Facaweyn mingistume soo Dag,
Suldaan, salaan gobeed iga guddoon marka hore. Bacdigeed na su’aal garaad leh ayaad madasha soo dhex dhigtay oo aan jeclaan lahaa in aragtidayda ka dhiibto.
Soomaalidu marka xunta loo hadlo waxay ka mid tahay ummadaha qaaradda Afrika oogu dhaqanka adag ee aad mooddo in aanay Islaamnimada saafiga ah ee ay calfatay qummaati ugu dhaqmin waloow haddana ay Islaamnimadu rugta u tahay hiddaha iyo dhaqankeeda. Marka qaab aqooneed loogu sii dhabbagalo na waxaa muuqanaysa in ay Soomalidu ama deegaan ahaan ama beelo ahaan ugu sii ka la dhaqan adagtahay oo duwan tahay oo ay sii ka la xadaarad iyo ilbaxnimo badan tahay.
Waxaa intaas ugu darsamay oo waliba uuga sii daray siyaasad qalaad oo shisheeyaha uga timid ee teer iyo gumeysigii iyo waxii ka dambeeyay si xun masiirkeedii iyo nadaamkeedii uga qasay, siyaasaddaas oo ka soo dibindaabinaysay labada jaanib ee Ruushka iyo Galbeedka sida laga wada dharegsan yahay. Anigu waxaan ka tirsanahay dadka u arka ee aaminsan in aanay siyaasadda iyo nadaamyadan shisheeye ee 60kii sanadood ee inaga soo khasaaray mandiqaddeena iyo ummaddeena lagu hirbinaayay aanay ku habboonayn maadaama ay hab nololeedka Soomaaliyeed ee soojireenka ahaa is waafaqsanayn.
Waxaa uu anigu xalkeenu iiga dhex bidhaamayaa iyada oo aynu waxan shisheeye heeryadooda iska rogna oo nadaam ugub ah ee nagu gaar ah oo anaga naga unkamay ee Soomaalinimada salka ku haya hindisaheeda la nimaadno.
*Ka raalli ahaada qaladaadka qoraalka iga galay.